သုဘရာဇာကြီးတစ်ယောက် ဇောချွေးပြန်ခဲ့ရတဲ့ ည - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / သုဘရာဇာကြီးတစ်ယောက် ဇောချွေးပြန်ခဲ့ရတဲ့ ည
သုဘရာဇာကြီးတစ်ယောက် ဇောချွေးပြန်ခဲ့ရတဲ့ ည
Apann Pyay 8:53 AM ဗဟုသုတအစုံ Edit
မေတ္တာသင်္ဂဟ နာရေးကူညီမှူအသင်းမှာ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်လာရကတည်းက အတွေ့အကြုံတွေရပြီးသားပါ ။ အိုခြင်း...နာခြင်း...သေခြင်း တရားတွေကိုအခြားသူတွေလိုရှာစရာမလိုပဲ ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ကြုံနေရသူပါ ။ သွေးသံရဲရဲနဲ့ လူနာတွေ...မသေမရှင်ဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေ... ကိုယ့်လက်ပေါ်မှာတင် အသက်ထွက်သွားတဲ့ လူနာတွေ ကိုကြည့်ပြီး သံဝေဂ ရခဲ့ပေါင်းလဲ မနည်းတော့ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ အသင်းလေးက အခြားအသင်းကြီးတွေလို ပြည့်စုံလှတဲ့ အသင်းမဟုတ်ပေမယ့် စေတနာအရင်းခံပြီး လူမှူရေးပရဟိတအလုပ်ကို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လုပ်နေကြရတာပါ ။ အခက်အခဲတွေမျိုးစုံကိုရုန်းကန်ရင်း အသက်တွေကယ်ခဲ့ရသလို... အတိုက်အခံတွေမျိုးစုံကိုလဲ ကျော်လွှားဖြတ်သန်းရင်း ရုန်းကန်နေရစဲပါ ။ သေခြင်းတရားဆိုတာ မည်သူမျှမလွန်ဆန်နိုင်ကြပါဘူး ။ သုဘရာဇာလို့ပဲ ပြောပြော.... ဒွန်းစဏ္ဍားပဲဆိုဆို အများမလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့ သူတွေနဲ့ အတူလုပ်နေရတဲ့ အတွက် ကျေနပ်မိပါတယ် ။
သက်မဲ့ခန္တာကိုယ်တွေကို သယ်ယူရတဲ့အလုပ်ကလဲ လွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး ။ ရောဂါမျိုးစုံနဲ့ သေကြရတဲ့သူတွေရှိသလို အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက် လူကြီးရောဂါတွေနဲ့ သေဆုံးကြရတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပုပ်ပွနေတဲ့ အလောင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ပြီး သယ်ယူပေးရတဲ့ အလုပ်ကိုလဲ လုပ်ကိုင်ရတာတွေရှိပါတယ် ။ သုဘ...တင့်တယ်ခြင်း...။ အသုဘ...အမြင်အဆင်းမတင့်တယ်ခြင်းလို့ ဆိုကတည်းက ဘယ်မှာ အဆင်းလှပပေတော့မှာလဲလေ...။ ပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်က မထိမကိုင်ချင်ကြတဲ့ သက်မဲ့ ခန္တာကိုယ်တွေကို မရွံမရှာ ကိုင်တွယ်ပြီး သင်္ဂြိုလ်ပေးရတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပေးနေရတဲ့ ညီနောင် နာကူအသင်းအဖွဲ့တွေကိုလဲ လေးစား ခင်မင်မိပါတယ် ။ အရင်အချိန်က နံမည်ကျော် ဦးပန်ချာရယ် ဦးအေးမောင်ရယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိခဲ့ကြတယ် ။ လူမှူရေးပိုင်းအရ အနှိမ်ခံခဲ့ရပေမယ့် သူတို့နဲ့ မပါတ်သက်ပဲကိုနေလို့မရခဲ့ပါဘူး ။ အနှီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေက အခေါင်းရောင်းတာရယ် အလောင်းသယ်ပြီး မြေချဖို့ရယ်ပဲတာဝန်ယူကြပါတယ် ။
အခုခေတ်မှာတော့ လူမှူရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ယာဉ်တိုက်မှူကြောင့် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရသူများသာမက... လူနာများ... သက်မဲ့ ခန္တာကိုယ်များကိုပါ အကူအညီပေးလုပ်ကိုင်လာကြတဲ့အပြင် လုမှူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လာကြပါတယ် ။ သဘာဝဘေးဒါဏ်ကြောင့် တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ...ရေပြတ်လပ်မှူတွေပါမကျန် အားတက်သရောနဲ့ အကူအညီပေးလာကြပါတယ် ။ ဒီတော့လဲ နာရေးကူညီမှူအသင်းဆိုတာထက်...သာရေးနာရေး လူမှူကူညီမှူအသင်းများရယ်လို့ အမည်တပ်ခဲ့ကြရပါတော့တယ် ။ ရင်ဘတ်ချင်းတူကြတဲ့ သူတွေမို့ မအားလပ်တဲ့ အသင်းကနေ တဆင့်အကူအညီတောင်းရတာတွေလဲ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဟုတ်ကဲ့....ကျွန်တော် မင်းဒင်ပါ ။ သုဘရာဇာမင်းဒင်ကြီးပါ ။ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းက နွမ်းပါးတဲ့ မေတ္တာသင်္ဂဟ သာရေး နာရေး ကူညီမှူအသင်းကပါခင်ဗျာ ။ သုဘရာဇာမင်းဒင် သရဲလဲမကြောက်တတ်ဘူး ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ သုဘရာဇာကြီးတစ်ယောက် ဇောချွေးပြန်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်လေးကို ဖောက်သည်ချပါရစေ....။
၁၃ . ဖော်ဖေါ်ဝါရီလ. ၂၀၁၇ ခုနှစ်.........
အချိန်က... ည7: 45 မိနစ် ....
" ဟယ်လို..... မင်္ဂလာပါညီလေး.... "
" မင်္ဂလာပါအကို.... "
" ညီလေးရေ.... လူနာလမ်းကြောင်းသွားပေးလို့ရမလား.... "
ရွှေသံလျင် နာရေးကူညီမှူအသင်း ဥက္ကဌ ဦးအောင်ခိုင်ဝင်းက ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး အကူအညီတောင်းလာပါတယ် ။
" ရပါတယ်အကိုကြီး.... ကျွန်တော့မှာ နာရေးကားရော ( ၁၃ ) သွေးလူငယ် လူနာတင်ကားရော အသင့်ပါခင်ဗျာ "
" အကိုက မနက်မှာ လူနာသွားကြိုရမှာမို့လို့ပါညီလေး... ညီလေးတို့ဖုန်းကို အကိုလွှဲပေးလိုက်မယ်နော် "
" ဟုတ်ကဲ့ အကို... လွှဲပေးလိုက်ပါ... "
" ကျေးဇူးပါညီလေး...မင်္ဂလာပါ "
" မင်္ဂလာပါအကိုကြီး... "
" ဟယ်လို.... မေတ္တာသင်္ဂဟက အသင်းကပါလားခင်ဗျာ... "
" မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ....ဘာများအကူအညီပေးရမလဲခင်ဗျာ... "
" ကျွန်တော့်အဒေါ်ကို ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံက လက်လျှော့လိုက်လို့ ရွာကိုပြန်ခေါ်သွားချင်လို့ပါဗျာ... ပိုက်ဆံလဲ သိပ်မတတ်နိုင်ဘူး...အကိုတို့အသင်းက ကားကူညီပေးခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲခင်ဗျာ "
" ဟာ....အကို...ကျွန်တော်တို့ အသင်းက ငွေတန်ဖိုးမသတ်မမှတ်ထားပါဘူးခင်ဗျာ... အသွားအပြန် ကားဆီဖိုး လှူပေးရင်ရပါပြီခင်ဗျ "
"ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ..... ကျွန်တော် အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးကစောင့်နေပါ့မယ်အကို...ကူညီပေးပါခင်ဗျာ "
" စိတ်ချပါခင်ဗျာ...ကျွန်တော်တို့က ဒဂုံအရှေ့ကနေ အအလုံမြို့နယ်အထိလာရမှာဆိုတော့ တစ်နာရီလောက်တော့ကြာမယ်နော်...အကို.. "
" ရပါတယ်အကို...ကျွန်တော် စောင့်နေပါ့မယ်... "
ညရှစ်နာရီခွဲ လောက်မှာတော့ သွေးလူငယ် သွေးလှူရှင်အသင်းက လူနာတင်ယာဉ်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ် ။
" အကိုကြီး...ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့်ပဲ... သွားကြမယ်လေ... "
သွေးလူငယ် ကိုခင်ဇော်ကလဲ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အသင့်ရှိနေပါတယ် ။
" အေး...ခင်ဇော်... ငါဆေးရုံကို ဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်ဦီးမယ် "
ကိုခင်ဇော်ကို လှမ်းပြောပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ အကူအညီတောင်းထားတဲ့သူဆီကို ချက်ချင်းဖုန်းလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ် ။
" ဟယ်လို....မေတ္တာသင်္ဂဟ အသင်းကပါခင်ဗျာ...ကျွန်တော်တို့ ထွက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအသိပေးတာပါ "
" ဟုတ်ကဲ့...အကိုရေ...အဒေါ်က အခုလေးတင်ပဲ ဆုံးသွားပြီဗျာ...ရှင်ရှင် သေသေ ရွာကိုပဲ ပြန်ခေါ်သွာချင်ပါတယ်အကို... "
" ဒါဆိုလဲရတယ်လေ...ကျွန်တော်တို့ နာရေးကားနဲ့ ထွက်လာခဲ့မယ်...စောင့်နေဗျာ "
" ဟုတ်ကဲ့အကို...ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ "
ဖုန်းချလိုက်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ဘတ်တူ ညီနောင်တော်တွေကို အသိပေးရပါပြီ ။
" ကဲ...ကိုယ့်ဆရာတို့ရေ...လူနာမဟုတ်တော့ဘူး....လူသေဖြစ်သွားပြီ "
" သေသေ ရှင်ရှင်ဗျာ...အကူအညီတောင်းရင်တော့ သွားရမှာပဲ....လိုက်မယ်အကိုရာ...သွားကြတာပေါ့ "
အဖြူရောင် ပရဟိတ ရေအလှူအသင်းက ကိုခိုင်စိုးကလည်း လိုက်မယ်တကဲကဲ ဖြစ်နေလေသည် ။
" ကဲ...ဒီတစ်ကြောင်းကတော့... အတွေ့အကြုံလိုချင်တဲ့သူကများနေတော့ အသင်းအင်္ကျီတွေကလဲ မရှိတော့ဘူး...ကိုယ့်အသင်းဝတ်စုံတွေနဲ့ ပဲ လိုက်ခဲ့ကြတော့ဗျာ... "
အသင်းကနေ ကားစထွက်တော့ ညကိုးနာရီထိုးပါတော့မယ် ။ အလုံမြို့နယ်အထိသွားရမှာဆိုတော့ ညဆယ်နာရီလောက်မှ ရောက်မယ်ဆိုတော့ နောက်အရမ်းကျမှာကိုစိုးရိမ်စိတ်ကဝင်လာပါတော့တယ် ။
" ကဲ...ကဲ...ကားပေါ်တက်တော့ဟေ့... မေတ္တာသင်္ဂဟရယ်...အဖြူရောင်ရယ်..သွေးလူငယ်ရယ်...သုံးသင်း...သုံးယောက်ပေါ့ကွာ... "
သွေးလူငယ် ခင်ဇော်က ကားမောင်း...၊ ကျွန်တော်က တာဝန်ခံဆိုတော့ ရှေ့ဆုံးမှာထိုင်ပြီး အဖြူရောင် ကိုခိုင်စိုးက အနောက်မှာ ထိုင်ပြီး စတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ် ။ လက်ပါတ်နာရီကိုလှမ်းကြည့်မိတော့ ညကိုးနာရီ ထိုးပါပြီ ။
" အကိုလုပ်လေဗျာ...မနောရဲ့အသံလေး... "
" ကားမောင်းနေရင်းမှ လှမ်းပြောလိုက်တဲ့ ကိုခင်ဇော်ကို လှမ်းကြည့်မိပြီး မနောသီချင်းဖွင့်ဖို့အတွက် မေ့သွားတာကို သတိထားလိုက်မိပါတယ် ။
" ကဲ...ကဲ...ဖွင့်ပြီဟေ့... "
" ပရေတံ......ဟိတံ...ပရဟိတံ...ပရေကံ...ဟိကံ...ပရဟိကံ...သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြခြင်းသည်....ပရဟိတ လုပ်ငန်းဟုခေါ်သည် "
မနောရဲ့ သီချင်းသံလေးက ကားထဲမှာ ပျံ့လွင့်နေသလို ကျွန်တော်တို့ ရင်ဘတ်တူ ညီအကိုများရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း ကြည့်နူးတက်ကြွနေတဲ့စိတ်တွေ လျှံထွက်နေပါတော့တယ် ။
" အကို.... ရောက်ခါနီးပြီလား.... "
အကူအညီတောင်းထားသူဆီက ဖုန်းဝင်လာတာတွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် ။
" ဟုတ်ကဲ့အကို...ရောက်ခါနီးပါပြီ.....ဆေးရုံအဝက စောင့်ပေးပါခင်ဗျာ "
အလုံမြို့နယ် ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကိုရောက်တော့ ညဆယ်နာရီထိုးပါတော့မယ်...။ ဆေးရုံဝင်ပေါက်ကို ကားကွေ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဆေးရုံရဲ့ အပေါက်ဝအရှေ့မှာ လူလေးငါးခြောက်ယောက်လောက် စုပြုံစောင့်နေကြတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။ လူအုပ်စုထဲက အဝတ်အစား ခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ အသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ့် အမျိုးသားတစ်ယောက်က လက်ပြနှူတ်ဆက်ပါတယ် ။
" ကျွန်တော့်နံမည် စံမောင်ပါအကို... ဆေးရုံက အကိုတို့ အသင်းရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေးလို့ အကို့ကိုအကူအညီလှမ်းတောင်းလိုက်ရတာပါ "
ကိုစံမောင်ရဲ့ အနောက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်..အမျိုးသားလေးယောက်..ကိုစံမောင်အပါအဝင်ဆိုရင် ခြောက်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ် ။
" ကိုစံမောင်....ခင်ဗျားတို့က နာရေးရှင်တွေလား... ကားနဲ့ ဘယ်နှစ်ယောက်လိုက်မှာလဲ "
" ဆုံးသွားတာ ကျွန်တော်တို့ အဒေါ်ပါ...ကျွန်တော်တို့က တူတွေ တူမတွေပါအကို... "
" ခင်ဗျားတို့က ဘယ်နှစ်ယောက်ပြန်လိုက်ကြမှာလဲဗျ... "
" ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်လုံးလိုက်ချင်ပါတယ်အကို... "
" ဗျာ.... ခြောက်ယောက်လုံး...ဟုတ်လား..... ကျွန်တော်တို့ကားက နယ်ဝေးကာယကံရှင် သုံးဦးထက် ပိုလိုက်ခွင့်မပေးဘူးဗျ "
" လုပ်ပါအကိုရယ်...ဒီအချိန် မော်ကျွန်းကိုကားငှားပြန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လို့ပါ...။ အငှားကားက တစ်သိန်းတောင်းတယ်အကို... အခြားနာရေးကားလဲ မေးကြည့်ပြီးပြီ... သုံးသိန်းခွဲတဲ့အကိုရာ...ကျွန်တော်တို့အဲဒီလောက်မတတ်နိုင်ဘူးအကို.... လုပ်ပါအကို...ဖြစ်သလိုလိုက်ပါ့မယ် "
ကျွန်တော်စဉ်းစားရအတော်ကျပ်မိပါတယ် ။ ထားခဲ့ရပြန်ရင်လဲ သူတို့အတွက် ကြုံရမယ့် အခက်အခဲကို ကိုယ်ချင်းစာမိသလို...ခေါ်သွားပြန်ရင်လည်း ကားထဲမှာ လူသေအလောင်းရယ်... ကျွန်တော်တို့တွေရယ်ဆို..ကျပ်ညပ်နေတော့မယ် ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမြန်ဆုံးချနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်အလျှင်အမြန်စဉ်းစားရပါတော့တယ် ။
" ခင်ဇော်....ညီလေး.... အသွားအပြန် မင်းတစ်ယောက်ထဲ မောင်းလို့ဖြစ်မလား... "
" ရတယ်အကို.... သွားကြမယ်...၊ အရမ်းနောက်ကျသွားရင် ရွာထဲကို သူတို့ ဝင်ဖို့ခက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အကို "
" ကဲ...ဒါဆိုလဲ...အလောင်းသွားထုတ်တော့...၊ ကျန်တဲ့လူတွေက ပစ္စည်းတွေတင်တော့....ကြာတယ်ကွာ.....လက်အိတ်တွေစွပ်ပြီး အလောင်းကို အခေါင်းထဲထည့်ကြတော့... "
လိုအပ်တာတွေ စီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ နာရေးရှင်တွေက ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ ကားထဲဝင်ပြီးနေရာယူနေကြပါပြီ ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ထောင်းကနဲနေအောင် စိတ်တိုသွားမိပါတယ် ။
" ဟာ..... ဟေ့လူတွေ..... ခင်ဗျားတို့က ကိုယ့်မသာကိုအရင်မတင်ပဲ ခင်ဗျားတို့က နေရာအရင်ဝင်ယူနေတာ ခင်ဗျားတို့ကမသာတွေလား...အကုန်ပြန်ဆင်းကြဗျာ "
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ထဲကပေါက်ကွဲမှူတွေက စကားလုံးအဖြစ်နဲ့ ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပေါက်ကွဲမှူသံစဉ်ကြောင့် သူတို့မှာလဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ပြန်ဆင်းလာကြတယ် ။ တဒင်္ဂစိတ်ကြောင့် ပြောလိုက်တဲ့စကားကို နောင်တရလိုမိသလို သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပြန်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်လဲ မျက်နှာကို ချက်ချင်းပြန်ပြင်ပြီးတော့ သူတို့ကို အကူအညီပေးဖို့ ပြောရပါတော့တယ် ။
" ကဲ...ကဲ...အမျိုးသားတွေ....ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပြီး အလောင်းကိုဝိုင်းသယ်ပေးကြပါဦး.... ပြီးမှ နေရာချပေးပါ့မယ်... "
ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေ တင်လာတဲ့ ကုတင်ပေါ်က ဒေါ်ကြည်ဌေး ( ၅၈ ) နှစ် ရုပ်အလောင်းကို မှန်ခေါင်းထဲထည့်ပြီး တာနဲ့ စတီးဗန်းပေါ်တင်...ကားထဲက စတီးဘောက်စ်ထဲကိုထည့်ပြီးတာနဲ့ ကားနောက်ဖုံးတံခါးကို အားနဲ့ ပိတ်ချလိုက်ပါတော့တယ် ။
" ဂျိမ်း... "
" ကဲ...အလောင်းတော့ တင်ပြီးပြီ...ကျွန်တော်နေရာချပေးမယ်...။ ဟိုပိန်ပိန်နဲ့ အကိုက သေသွားတဲ့ အဒေါ်ထက် အသက်ကြီးလား.... "
" ဟုတ်ကဲ့ဆရာ...သေသွားတဲ့ မကြည်ဌေးက ကျွန်တော့်ညီမပါ "
" ကောင်းလိုက်လေဗျာ.... ဆေးရုံစောင့်ရတော့ ခင်ဗျားလဲ ပင်ပန်းနေမှာပေါ့....၊ အားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင် စတီးဘောက်စ်ကြီးပေါ်အိပ်ဗျာ... ဘောက်စ်ကြီးက ကုတင်လိုပါပဲ...၊ ကိုယ်ထင်ရင် ကုတင်ရွှေနန်းလို့တောင်ပြောကြသေးတာပဲဗျာ...။ အဲဒီအပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ အိပ်ပြီးသာလိုက်လာခဲ့တော့ဗျာ...ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား... "
" ရပါတယ်ဆရာ...ကျွန်တော်လဲ အိပ်ချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ... "
" ဒါဆိုလဲ တက်တော့ဗျာ... "
" စတီးဘောက်စ်ရဲ့ဘေးမှာ ဆိုဖာတစ်စုံရှိတယ်... နောက်နှစ်ယောက်က တက်ထိုင်လိုက်ဗျာ... ဆိုဖာခုံရှေ့က ပလပ်စတစ်နောက်မှီထိုင်ခုံလေးမှာ ဒီကညီမကဝင်ထိုင်လိုက်ဗျာ...၊ ယာဉ်မောင်းနောက်ဖက်မှာ ထိုင်ခုံတွေနဲ့ ကိုခိုင်စိုးရယ် နောက်နှစ်ယောက်ရယ်က ဝင်ထိုင်လိုက်ဗျာ.... "
နာရေးကူညီမှူ အတွက် တာဝန်ခံလုပ်တာနဲ့တင်မလုံလောက်တော့ စပါယ်ယာလုပ်ပြီး နေရာချခဲ့ရပါတယ်....။ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆေးရုံက ဝန်ထမ်းတွေကို လက်အုပ်ချီပြီးနှူတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ ကားစထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ် ။
" ဆရာတို့ ဆရာမတို့..ကျွန်တော်တို့သွားပြီဗျာ.... "
" အကိုရေ...ပြဿနာပဲဗျာ... "
ခပ်တိုးတိုးပြောလာတဲ့ ကိုခင်ဇော်ရဲ့ စကားကြောင့် ကျွန်တော် အံ့အားသင့်ပြီး သူ့ကိုပြန်မေးမိပါတယ် ။
" ဘာဖြစ်လို့လဲညီလေး....ဆီကုန်ခါနီးပြီလား...ညနေကပဲ သုံးသောင်းဖိုးထည့်ထားတယ်လေကွာ... "
" မဟုတ်ဖူးအကို...သူတို့ကခြောက်ယောက်...ကျွန်တော်တို့က သုံးယောက်ဆိုတော့ ကိုးယောက်ဖြစ်နေတယ်လေဗျာ ..အမြန်လမ်းက အံစာတုံးကို သွားသတိရမိလို့ပါ "
ကိုခင်ဇော်ပြောမှပဲသတိထားမိပြီး ဟုတ်သလိုလိုထင်နေရာက တစ်ခုစဉ်းစားမိပြီး ပြုံးလိုက်မိပါတယ် ။
" ညီလေးကလဲကွာ...သူတို့ကခြောက်ယောက်..ကိုတို့က သုံးယောက်...မသာကတစ်ယောက်လေကွာ... ပေါင်းဆယ်ရောက်ပေါ့..မဟုတ်ဖူးလား... "
" ဟာ...အကိုကလဲ...အထဲက သေနေတာလေ... "
" အေးလေ...သူလဲ တစ်ယောက်ပေါ့ကွာ... "
ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကို ကိုခင်ဇော်နားလည်သွားတာကြောင့် ပြုံးပြီး ကားကိုဆက်မောင်းသွားပါတော့တယ် ။
လှိူင်သာယာဘက်ရောက်တော့ ည ဆယ့်တစ်နာရီ ကျော်ပါပြီ ။ လမ်းဘေး ဝဲယာ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့ အလုပ်ပြန်တဲ့သူတွေ.... ကားစောင့်နေတဲ့သူတွေ.... လက်ထဲမှာ အထပ်လေးဆွဲပြီး သိုင်းကွက်နင်းနေတဲ့သူတွေ နဲ့ မြို့ပြရဲ့ အိပ်တန်းတက်ကြတော့မယ့်သူတွေကို ငေးမောနေမိရင်းက အနောက်က နာရေးရှင်တွေကို လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ် ။
" အဆင်ပြေကြရဲ့လားဗျ.... ဘာရောဂါနဲ့ ဆုံးတာလဲ ...ရွာကည အချိန်ပြန်သယ်လာတာလက်ခံရဲ့လား..... " ဆိုတဲ့ အလာပ သလာပ တွေမေးမြန်းရင်းနဲ့ပဲ.....မအူပင်တံတားကြီးကိုဖြတ်ပြီး မအူပင်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ ။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ညသန်းခေါင်ကျော်လွန်ပြီး နေ့သစ်ရဲ့အစ မနက်တစ်နာရီထိုးနေပါပြီ ။
" ကိုယ့်ဆရာတို့....မအူပင်ကျော်လို့ မှော်ကျွန်းကိုရောက်ရင် ဘယ်ချိုး ညာချိုးပြောပေးကြဦးနော်.... "
" ဗျာ...အခု ဘယ်နားရောက်နေပြီလဲ "
" မော်ကျွန်းရောက်တော့မယ်ဗျ... "
" လိုသေးတယ်ဆရာ...မော်ကျွန်းကနေ နောက်တစ်နာရီလောက် ထပ်မောင်းရဦးမယ်ခင်ဗျ... "
" ခင်ဗျားက အချိန်မှန်းတာ ကျွမ်းကျင်လှပါလား "
" ကျွန်တော်က ကျိုက်ပိကနေ မအူပင်ကို ကားလိုက်တယ်ခင်ဗျ "
" ဒါနဲ့.... ကျွန်တော်တို့က အလောင်းကို ရွာထဲမောင်းပို့ရမှာလား "
" မဟုတ်ဖူးဆရာ...ကျိုက်ပိနားရောက်ရင် သင်္ချိုင်းကုန်းကိုတွေ့လိမ့်မယ် ။ ညာဘက်မှာချောင်း...ဘယ်ဘက်မှာလယ်ကွင်း ရှိတယ် ။ ကျိုက်ပိတံတားနားရောက်ရင် ကျွန်တော်တို့ကို ပဲ့ထောင်နဲ့ လာကြိုကြမှာဆရာ....။ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ ကညင်ညောင်းရွာက ချောင်းရဲ့ တစ်ဖက်ကမ်းမှာပါဆရာ "
" ဟုတ်ပြီ...ဒါဆိုရင်လဲ လာကြိုမယ့်သူတွေကို ဖုန်းကြိုဆက်ထားလိုက်ဦး "
" အေး....ဟုတ်တယ်ကွ.... မောင်နီတို့ကို လှမ်းဆက်ထားလိုက်ဦးလေကွာ.... နောက်ပြီးတော့ လမ်းမှာ ငါပြောထားတာ ဆရာတို့ကိုလဲ ပြောပြလိုက်ဦး "
" နေပါဦးဟ...ဆင်းတော့မှ ပြောမှာပေါ့ကွ "
သူတို့ဘာပြောချင်မှန်းမသိပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ငွေကြေးအခက်အခဲကိုပြောချင်နေပုံရတယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ် ။
" ဟေ့လူတွေ...ကားဆီဖိုးက အသွားအပြန် ခြောက်သောင်းလောက်ပဲကျမှာဗျ...အဆင်မပြေဘူးဆိုလဲပြောနော်...အားမနာနဲ့..ကျွန်တော်တို့လှူသင့်ရင် လှူမှာပါ "
" ပိုက်ဆံကပါ ပါတယ်ဆရာ..ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မှပဲပြောပြပါ့မယ် ...ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်.. "
" တစ်လမ်းလုံးကျေးဇူးတင်လာလိုက်တာ...ခင်ဗျားတို့ဆီကကျေးဇူးကို မအူပင်ရောက်မှပဲ ထမင်းနဲ့ ကြော်စားပစ်လိုက်တော့မယ်...ဟား..ဟား... "
ရယ်ရယ်မောမောဖြင့် ပြောလိုက်သော ကျွန်တော့်စကားကြောင့် အားလုံးလန်းဆန်းသွားကာ နိုးကြားလာကြလေပြီ ။ ကျွန်တော့်ဖုန်းက ဂျီပီအက်စ်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ ကျိုက်ပိကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ် ။ အချိန်ကတော့ မနက်နှစ်နာရီကျော်နေပါပြီ ။ ဘယ်ဖက်မှာတော့ သင်္ချိုင်းကုန်းကိုမြင်နေရပြီး ချောင်းရေပြင်နှင့် လယ်ကွင်းပြင်ကြီးကို တရိပ်ရိပ်ဖြတ်ကျော်နေပါတယ် ။ လမ်းရဲ့ ဘယ်ဖက်အခြမ်းမှာ အကာမရှိတဲ့ လယ်စောင့်တဲတစ်လုံးကလွဲလို့ ခြုံငယ်ပင်ပုတွေတောင် မရှိဘူးဆိုတာ သတိထားလိုက်မိပါတယ် ။ စိတ်ထဲတော့ မသိုးမသန့်ဖြစ်သလိုခံစားနေရပါတယ် ။ ဘာရယ်လို့တော့ အတိအကျပြောလို့မရတဲ့ ခံစားချက်ပေါ့ ။
ကားကို ရုတ်တရက် ဘယ်ဖက်ကွေ့လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ဓာတ်မီးရောင်ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရပါတယ် ။
" ဟေ့လူတွေ... ရှေ့မှာ ဓာတ်မီးရောင်တွေ့ပြီ...ကုန်းပေါ်မှာ ခင်ဗျားတို့လူတွေလား... "
" ဟုတ်မယ်ဆရာ...အဲဒါကုန်းမဟုတ်ဖူး....တံတားပါ...။ ဘယ်ဖက်မှာ ပဲ့ထောင်ရပ်ထားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆရာ...
တွေ့ပါပြီ.... ရှေ့မှာ လူလေးငါးယောက် ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးပြီး ကားကို ဘယ်ဖက် ကပ်ရပ်ဖို့ အချက်ပြနေပါတယ် ။ အဲဒီနေရာရောက်တာနဲ့ ကိုခင်ဇော်ကလည်း ကားကို တံတားပေါ်အထိတက်ပြီး နောက်ပြန်လှည့်ကာ အပြန်လမ်းကိုဦးတည်ပြီး ရပ်လိုက်ပါတယ် ။ ကားရပ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်ထဲဆိုသလို ကားပေါ်ပါလာတဲ့ လူတွေက ကားမီးတွေပိတ်ပေးဖို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြောပါတယ် ။ လိုရာခရီးရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာကြောင့်လဲ....ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးမနေတော့ပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ကားအောက်ကိုဆင်းပြီး လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်ကြပါတယ် ။ ကားနောက်ဖုံးကိုဖွင့်ပြီး မှန်ခေါင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကာ အခေါင်းဖုံးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
" ကဲ....လာကြဗျာ..... အားကောင်းတဲ့သူတွေက အရှေ့ အလယ်....သေသေချာချာမထုတ်ကြပေတော့ဗျာ "
" ရပါတယ်...သိပ်မလေးပါဘူး.... "
" ဟေ့ကောင်...သိပ်မလေးဘူးသာပြောတာ... လေးတယ်ကွ... "
" ဟာ...ဟေ့ကောင်...ဖြေးဖြေးလုပ်ကွ... "
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြားရုံလောက် အသံမတိုးမကျယ်ပြောရင်း တဖြေးဖြေးနဲ့ တံတားအောက်ဖက် ဆင်ခြေလျှောလမ်းအတုင်း လှေရှိရာကို သယ်သွားကြပါပြီ ။ ကားပေါ်မှာတော့ နာရေးရှင်နှစ်ယောက်နဲ့ .. ကိုခင်ဇော် ကိုခိုင်စိုးတို့နှစ်ယောက် အသင်းအတွက် အလှူငွေ...ဆီဖိုးကို မှတ်တမ်းရေးပြီး လက်ခံနေကြပါတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကားနားမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ရွာသားအချို့နဲ့ မှန်အခေါင်းကို စတီးဘောက်စ်ထဲ ပြန်ထည့်ပြီး နောက်တံခါးကိုပြန်ပိတ်ရင်း အလုပ်ကို လက်စသတ်လိုက်ပါတော့တယ် ။
" အကိုကြီးတို့ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်..ရှိခိုးပြီးကန်တော့ပါတယ်ဗျာ... "
နာရေးရှင် ကိုစံမောင်က လက်အုပ်လေးချီပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောနေတာကိုကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်လိုက်မိပါတယ် ။
" ရပါတယ်ဗျာ... ကျွန်တော်တို့ အသင်းရဲ့ ဝတ္တရားက လူမျိုးဘာသာ...ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးပဲ... လူမှူရေးလုပ်နေတဲ့ အသင်းပါ ....ကဲ...ကဲ...ကျွန်တော်တို့လဲ ရန်ကုန်ပြန်ရဦးမှာ...ဗိုက်လဲဆာနေပြီ... မအူပင်ရောက်မှပဲ ထမင်းဝင်စားတော့မယ်... သွားပြီဗျို့ "
" အကို...အကို.....ခဏလေး... "
" ဘာလဲဗျ..ကိုစံမောင်... "
" ဟိုလေ... ဒီရောက်မှပြောမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စလေ...အအဲဒါပြောမလို့ "
" အေး....ဟုတ်သားပဲ...ဘာပြောမလို့လဲ ကိုစံမောင်... "
" အကိုတို့ပြန်ရင် မော်ကျွန်းမြို့အစပ်နားမရောက်ခင် လမ်းမှာကားကြုံတားရင် မရပ်ပေးနဲ့နော်...ပုံမှန်လေးသာမောင်းသွားပါ "
" ဟာ...ဘာတုန်းဗျ.... ခင်ဗျားဟာကလဲ ... ကျွန်တော်တို့ နေရာအနှံ့လျှောက်သွားနေတာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာ....လုယက်ရင်တောင်မှ အလှူငွေနဲ့ အခေါင်းပဲပေးလို့ရမှာ... လိုချင်ရင်လဲ ပေးလိုက်ရုံပေါ့ဗျာ... ကဲ..ကဲ..သွားပြီဗျို့... ညီလေးခင်ဇော်ရေ...မောင်းတော့ "
အမှောင်ထဲမှာ လက်ကာပြရင်းကျန်ခဲ့သော ကိုစံမောင်တို့က တဖြေးဖြေးဖြင့်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြလေပြီ ။
" အကို.... ဒီလူပြောတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲမသိဘူးနော် "
" ခင်ဇော်....မင်းကလဲ ဘာကိုကြောက်နေတာလဲ... ဒလမှာ ကုလားမကြီးကို ညနေစောင်းကြီး ရင်ဘတ်ချုပ်ရိုးတွေဖြည်ပြီး ကလီစာတွေထုတ်...ဆေးည့်ပြီးပြန်ချုပ်ပေးခဲ့တာတောင်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တာ....ဘာကြောက်နေတာလဲ...ရှေ့ကိုသာ ဂရုစိုက်ပြီး ကြည့်မောင်းကွာ... "
ကားထွက်လာပြီး သိပ်မကြာခင်လောက်မှာပဲ ကားလမ်းရဲ့ ဘယ်ဖက်ခြမ်းမှာ အနီရောင်ဝတ်နဲ့ လူလို့ထင်ရတဲ့ အရာကို ကားမီးရောင်အောက်မှာ လှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ် ။ ခရီးဆုံးရင် လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အတိုင်း ဂျီပီအက်စ်ကိုဖွင့်ပြီး ကိုယ်ရောက်တဲ့နေရာကို စခရင်ရှော့ ရိုက်လိုက်ပါတယ် ။ တစ်လက်စထဲ မြင်နေရတဲ့ အရာကို ဖုန်းကင်မရာနဲ့ အနီးဆွဲပြီး ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက်လိုက်မိတယ် ။ ကားရှေ့မီးရောင်က မှန်ကနေအလင်းပြန်တော့ ပုံကသိပ်မသဲကွဲဘူးဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒါနဲ့ပဲ ကားဘေးမှန်ကိုဖွင့်... ခေါင်းကိုထွက်ပြီး မြင်နေရတဲ့ အရာကို ဓါတ်ပုံလှမ်းရိုက်လိုက်ပါတယ် ။
" ခင်ဇော်ရေ.... ရှေ့မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောကက်ကွ...ငါတို့တွေ့နေကျ ဂေါက်သီးတွေလားမသိဘူး...ဟွန်းတီးလိုက်ပါဦးကွာ...အရှိန်လဲနည်းနည်းလျှော့ထားကွ...၊ သူဂေါက်တာကအရေးမကြီးဘူး... တို့တွေထောင်ထဲရောက်ကုန်မယ်... "
" ပွမ်...ပွမ်... "
ကားဟွန်းသံပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကားမီးရောင်အောက်ကနေ ပျောက်သွားပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကားက ညာဖက်နည်းနည်းချိုးကွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက် ကားမီးရောင်က ညာဖက်မှာပဲရှိပါတယ် ။
" ခင်ဇော်...ရပ်ရပ်...ညီလေး...ဒီအရူးမ ကားဟွန်းသံကိုကြောက်လန့်ပြီး ရေထဲခုန်ချသွားရင်တော့ ဒုက္ခပဲကွ... "
ကားရပ်တာနဲ့ တပြိုင်နက်ထဲ ကားတံခါးကိုဖွင့်ပြီး ကားလမ်းဘေးကနေ ငါးပေအကွာလောက်ချောင်းကိုဆင်းကြည့်လိုက်ပါတယ် ။
" ခင်ဇော်ရေ... ကားကိုညာဖက် နည်းနည်းချိုးပြီး မီးထိုးပေးစမ်းကွာ.. "
ကိုခင်ဇော်က ကားကို ညာဖက်ချိုးပြီး ကားမီးကြီးနဲ့ ထိုးပေးလိုက်ပါတယ် ။
ကားမီးရောင်ကြောင့် ပါတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရပါပြီ ။ ရေပြင်တစ်ခုလုံး ငြိမ်သက်နေတဲ့အပြင် ဘာလှူပ်ရှားမှူကိုမှလဲမတွေ့ရတဲ့အတွက် ခေါင်းနပန်းတစ်ခုလုံကြီးပြီး ဆံပင်မွေးတွေထောင်ထလာပါတော့တယ် ။ လူနေအိမ်ခြေဆိုလို့ တစ်ခုတစ်လေတောင်မရှိတဲ့နေရာ...။ အရူးမ ဖြစ်စေဦးတော့ ဒီလိုနေရာကို လမ်းလျှောက်လာဖို့ဆိုတာ လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တာ ကျွန်တော်သတိထားလိုက်မိပါတယ် ။
" ဟင်...ဘုရားရေ... ဘာမှလဲမတွေ့ပါလား... "
ကျွန်တော့်နှာခေါင်းထဲကို ပုပ်အဲ့အဲ့အနံ့ကထောင်းကနဲဝင်လာပါတယ် ။ နာရေးတွေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့သူ...သင်္ချိုင်းနဲ့ ထိတွေ့နေရတဲ့သူဆိုတော့ ဒီအနံ့ဟာ လူသေကောင်ပုပ်နံ့ဆိုတာ သိလိုက်ပါတယ် ။ လူသေအလောင်းတွေကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နေရတာမကြောက်ခဲ့ပါဘူး ။ သရဲဆိုတာလဲ ကိုယ်တွေတစ်ခါမှမမြင်ဖူးခဲ့တာကြောင့် ဘယ်လိုဆိုတာကို သိလဲမသိပါဘူး... ။ အခုဏကမြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်လိုက်ရတဲ့အရာဟာ လူစင်စစ်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြနေပါပြီ ။
" ဟာ........ "
မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ကြက်သီးမွေးညင်းတွေထပြီး ဆံပင်မွေးတွေထောင်ထရလောက်အောင်ပါပဲ...။ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ အနီရောင်နဲ့ အမျိုးသမီး... ခေါင်းပြတ်ကြီးနဲ့...။
" အကို...ပြန်တက်ခဲ့တော့...သိပ်မဟုတ်တော့ဘူး... "
ကိုခင်ဇော်ပြောတာ နောက်ကျနေပါပြီ... ကိုခင်ဇော်လှမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာတင် ကျွန်တော် ကားပေါ်ရောက်ပြီး တံခါးကိုပိတ်ပြီးနေပါပြီ ။
" မောင်း...မောင်း..ညီလေး....ဘယ်ညာကိုသိပ်မကြည့်နဲ့ကွာ...ရှေ့ကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီးသတိထားမောင်း "
ကိုခင်ဇော်လဲ အခြေအနေကိုရိပ်မိလိုက်ပုံရပါတယ်...။ ကားကိုချက်ချင်းမောင်းထွက်လိုက်ပြီး ညာဖက်ကို ချိုးကွေ့ကာ လမ်းအတိုင်းဂရုတစိုက်မောင်းလာခဲ့ပါတယ်...။ ကိုခိုင်စိုးကတော့ ကားနောက်ဖက်မှာ အိပ်ငိုက်နေတော့ ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ မသိလိုက်ပါဘူး ။ သိပ်မကြာတဲ့ အချိန်မှာပဲ......
" ဟာ..... ညီလေး...ရပ်...ရပ်.... "
လမ်းလယ်မှာ ကန့်လန့်ခံပြီး ချထားတဲ့ မသာတင် လေးတိုင်စင် ကုတင်တစ်လုံးကို ဘွားကနဲ တွေ့လိုက်ရလို့ ကိုခင်ဇော်ကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့ အော်ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အော်သံနဲ့အတူ ကားကလဲ တုန့်ကနဲ ထိုးရပ်သွားပါတော့တယ်..။
" ကျွီ..... "
" ဟ....ဟ... အကိုဘာဖြစ်တာလဲ... "
အနောက်ခန်းမှာ အိပ်ငိုက်ပြီးလိုက်လာတဲ့ ကိုခိုင်စိုးက အလန့်တကြားထပြီး မေးလိုက်ပါတယ် ။
" အရှေ့မှာမြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ... ကဲ..ခင်ဇော်... မင်းနဲ့ ကိုခိုင်စိုးက အဲဒီမသာစင်ကြီးကို ဆင်းဖယ်ကွာ... ငါဖုန်းနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားမယ်...၊ မြန်မြန်လုပ်ကြကွာ... "
ပြောသာပြောနေရတာ... ကိုယ်တွေ့ကြုံလာခဲ့ရသူဆိုတော့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတွေက လေးပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ပါဘူး ။ ကြက်သီးတွေထပြီး နားထင်နားရင်းတွေလဲ ထူပူနေပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ... ကိုခိုင်စိုးနဲ့ ခင်ဇော်တို့နှစ်ယောက် သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ လေးတိုင်စင်ကို မ ရွှေ့လိုက်ကြပါတယ် ။ သူတို့လဲ ကျွန်တော့်လိုပဲ ထိတ်လန့်နေမယ်ထင်ပါတယ် ။
သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ရွှေ့နေကြတဲ့ သူတွေကိုလှမ်းကြည့်နေရတာကနေ စိတ်ထဲမသင်္ကာတာနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ် ။ အောင်မလေးဗျာ.... ခေါင်းမပါတဲ့သူရဲမက ကျွန်တော်တို့ဆီလျှောက်လာနေတယ်...။
" အောင်မလေးဗျာ... "
နားထဲမှာ မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သလိုကြားလိုက်ရပြီး တစ်ကိုယ်လုံးမြောက်တက်သွားမတတ်ပါပဲ...။ ကိုခိုင်စိုးနဲ့ ခင်ဇော်တို့နှစ်ယောက် ကားတံခါးအမြန်ဆွဲပိတ်လိုက်သံက လိပ်ပြာလွင့်မတတ်ဖြစ်သွားရပါတယ် ။
" ညီလေး...မြန်မြန်မောင်း...မြန်မြန်မောင်း.... ဘယ်မှမကြည့်နဲ့...ရှေ့ကိုပဲကြည့်... ဘယ်သူတားတားလုံးဝမရပ်နဲ့... အရှိန်လဲမလျှော့နဲ့... လမ်းလယ်မှာဆိုရင် တိုက်သာပစ်ကွာ... ဒီနားမှာ လူနေအိမ်မရှိဘူးကွ... "
" ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်မှန်းမသိတော့ပါဘူးဗျာ... "
ကိုခင်ဇော်က ညည်းတွားရင်း ကားကို အရှိန်မြှင့်ပြီး မောင်းပါတော့တယ် ။ ကားနောက်ခန်းက အခေါင်းထည့်တဲ့ စတီးဘောက်စိကြီးကလဲ တဂျမ်းဂျမ်းနဲ့...ခေါင်းတွေလဲ ပူထူပြီးတော့ သုံးယောက်သား အရှေ့ကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီးမောင်းလာလိုက်တာ... မျက်နှာချင်းဆိုင်လာတဲ့ ဆိုင်ကယ်မီး...ကားမီးတွေကိုလဲ ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပဲ ကားထဲမှာ ကမ္ဘာပျက်သလိုဖြစ်နေပါပြီ ။
ကျိုက်လတ်...မော်ကျွန်း...မအူပင် မြို့မှ ကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ့တော့မှပဲသက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့တယ် ။ မအူပင်ကားလမ်းဆုံရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ ညကားတွေရပ်တဲ့ ထမင်းဆိုင်ရှေ့မှာ ကားရပ်လိုက်တော့မှပဲ စိတ်သက်သာရာရပါတော့တယ် ။ စိတ်ကိုအေးချမ်းသွားတာပါပဲဗျာ...။ မအူပင်ရောက်တော့ မနက်လေးနာရီထိုးပါပြီ ။ အဲဒီအကြောင်းကို တွေးကိုမတွေးရဲတော့ပဲ ဘုရားကိုသာ အာရုံပြုနေလိုက်ပါတော့တယ် ။ တစ်လမ်းလုံး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ပဲ အတွေးကိုယ်စီနဲ့ အပြန်လမ်းမှာ.. ရင်ခုန်စရာအတွေ့အကြုံတွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်သယ်ဆောင်ရင်း မနက်အာရုံတက်အလင်းရောင်ကိုကြိုနေမိပါတော့တယ်....။
သုဘရာဇာမင်းဒင်လဲ နှလုံးသားနဲ့လူ.... အသွေးအသားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့လူပဲဗျာ... ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင် အဲဒီနေရာမှာသာ ခင်ဗျားတို့ဆိုရင် ရူးတောင်သွားဦးမယ်.....။ မပြောပဲ ချန်ထားခဲ့တာတွေရှိနေပါသေးတယ်....။ ဘယ်လောက်ပဲကြုံခဲ့ကြုံခဲ့...မင်းဒင်တို့က ဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေဦးမှာပါ ။ ဘယ်လောက်ပဲခြောက်လှန့်ခြောက်လှန့်...မင်းဒင်တို့က ဆက်လုပ်နေဦးမှာပါ...။ အကူအညီလိုရင်ပြောပါဆိုတိုင်း
ကြောက်မနေကြပါနဲ့.... တစ်ချိန်ချိန်မှာ အကူအညီလိုလာကြဦးမှာပါ....။ အဲဒီအခါကျရင် သုဘရာဇာမင်းဒင်ကြီးကိုသတိရလိုက်ပါ.....။ မင်းဒင်လဲ ဒီလမ်းကိုသွားရဦးမှာပါဗျာ....။ သာရေးအတွက်ပဲလိုလို...နာရေးအတွက်ပဲလိုလို...သွေးပဲလိုလို... အရေးပေါ်ပဲလိုလို... ဆီဖိုးနဲ့ သဒ္ဓါလို့လှူတဲ့ ငွေကလွဲပြီး ပိုမယူပါဘူး... ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆီဖိုးအိတ်စိုက်ရတဲ့အပြင်... သင်္ဂြိုလ်စားရိတ်ပါပြန်လှူခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ် ။
သခင်စံရွှေလမ်း... အမှတ် ( ၁၁ ) ၊ ဒဂုံမြို့သစ် ( အရှေ့ပိုင်း )
ဖုန်း.... ၀၉ ၂၅၀၀၁၀၁၉၉
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော စာဖတ်ပရိတ်သတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျား... ယ္ခုစာဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် ကိုမင်းဒင်ကိုယ်တိုင် လက်ရေးမူဖြင့်ရေးသားပေးပို့လာသည်ကို...စာရေးသူမှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွန်းမံခြင်း... ဖတ်ကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ရေးသားဖြည့်စွက်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး တင်ဆက်လိုက်ရပါသည် ။ နေရာအမည် လူအမည်များ အမှန်အတိုင်းရေးထားပါသည် ။
မတ်ေတာသင်ျဂဟ နာရေးကူညီမှူအသငျးမှာ တာဝနျယူလုပျဆောငျလာရကတညျးက အတှအေ့ကွုံတှရေပွီးသားပါ ။ အိုခွငျး...နာခွငျး...သခွေငျး တရားတှကေိုအခွားသူတှလေိုရှာစရာမလိုပဲ ကိုယျတိုငျမကျြမွငျတှကွေုံ့နရေသူပါ ။ သှေးသံရဲရဲနဲ့ လူနာတှေ...မသမေရှငျဖွဈနတေဲ့လူနာတှေ... ကိုယျ့လကျပျေါမှာတငျ အသကျထှကျသှားတဲ့ လူနာတှေ ကိုကွညျ့ပွီး သံဝဂေ ရခဲ့ပေါငျးလဲ မနညျးတော့ပါဘူး ။ ကြှနျတျောတို့ အသငျးလေးက အခွားအသငျးကွီးတှလေို ပွညျ့စုံလှတဲ့ အသငျးမဟုတျပမေယျ့ စတေနာအရငျးခံပွီး လူမှူရေးပရဟိတအလုပျကို တကျတကျကွှကွှနဲ့ လုပျနကွေရတာပါ ။ အခကျအခဲတှမြေိုးစုံကိုရုနျးကနျရငျး အသကျတှကေယျခဲ့ရသလို... အတိုကျအခံတှမြေိုးစုံကိုလဲ ကြျောလှားဖွတျသနျးရငျး ရုနျးကနျနရေစဲပါ ။ သခွေငျးတရားဆိုတာ မညျသူမြှမလှနျဆနျနိုငျကွပါဘူး ။ သုဘရာဇာလို့ပဲ ပွောပွော.... ဒှနျးစဏ်ဍားပဲဆိုဆို အမြားမလုပျနိုငျတဲ့ အလုပျကို ရငျဘတျခငျြးတူတဲ့ သူတှနေဲ့ အတူလုပျနရေတဲ့ အတှကျ ကနြေပျမိပါတယျ ။
သကျမဲ့ခန်တာကိုယျတှကို သယျယူရတဲ့အလုပျကလဲ လှယျတဲ့အလုပျမဟုတျပါဘူး ။ ရောဂါမြိုးစုံနဲ့ သကွေရတဲ့သူတှရှေိသလို အသကျအရှယျကွီးမွငျ့လာတဲ့အတှကျ လူကွီးရောဂါတှနေဲ့ သဆေုံးကွရတဲ့သူတှလေဲရှိပါတယျ ။ တဈခါတဈရံမှာ ပုပျပှနတေဲ့ အလောငျးတှကေို ကိုငျတှယျပွီး သယျယူပေးရတဲ့ အလုပျကိုလဲ လုပျကိုငျရတာတှရှေိပါတယျ ။ သုဘ...တငျ့တယျခွငျး...။ အသုဘ...အမွငျအဆငျးမတငျ့တယျခွငျးလို့ ဆိုကတညျးက ဘယျမှာ အဆငျးလှပပတေော့မှာလဲလေ...။ ပိုငျရှငျတှကေိုယျတိုငျက မထိမကိုငျခငျြကွတဲ့ သကျမဲ့ ခန်တာကိုယျတှကေို မရှံမရှာ ကိုငျတှယျပွီး သင်ျဂွိုလျပေးရတဲ့ အလုပျကို လုပျပေးနရေတဲ့ ညီနောငျ နာကူအသငျးအဖှဲ့တှကေိုလဲ လေးစား ခငျမငျမိပါတယျ ။ အရငျအခြိနျက နံမညျကြျော ဦးပနျခြာရယျ ဦးအေးမောငျရယျဆိုတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျကွီးတှရှေိခဲ့ကွတယျ ။ လူမှူရေးပိုငျးအရ အနှိမျခံခဲ့ရပမေယျ့ သူတို့နဲ့ မပါတျသကျပဲကိုနလေို့မရခဲ့ပါဘူး ။ အနှီ ပုဂ်ဂိုလျကွီးတှကေ အခေါငျးရောငျးတာရယျ အလောငျးသယျပွီး မွခေဖြို့ရယျပဲတာဝနျယူကွပါတယျ ။
အခုခတျေမှာတော့ လူမှူရေးအသငျးအဖှဲ့တှေ ပျေါပေါကျလာပွီး ယာဉျတိုကျမှူကွောငျ့ ထိခိုကျဒါဏျရာရသူမြားသာမက... လူနာမြား... သကျမဲ့ ခန်တာကိုယျမြားကိုပါ အကူအညီပေးလုပျကိုငျလာကွတဲ့အပွငျ လုမှူရေးလုပျငနျးတှမှောပါ တကျတကျကွှကွှ ပါဝငျလာကွပါတယျ ။ သဘာဝဘေးဒါဏျကွောငျ့ တှကွေုံ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှေ...ရပွေတျလပျမှူတှပေါမကနျြ အားတကျသရောနဲ့ အကူအညီပေးလာကွပါတယျ ။ ဒီတော့လဲ နာရေးကူညီမှူအသငျးဆိုတာထကျ...သာရေးနာရေး လူမှူကူညီမှူအသငျးမြားရယျလို့ အမညျတပျခဲ့ကွရပါတော့တယျ ။ ရငျဘတျခငျြးတူကွတဲ့ သူတှမေို့ မအားလပျတဲ့ အသငျးကနေ တဆငျ့အကူအညီတောငျးရတာတှလေဲ ရှိခဲ့ပါတယျ ။ ဟုတျကဲ့....ကြှနျတျော မငျးဒငျပါ ။ သုဘရာဇာမငျးဒငျကွီးပါ ။ ဒဂုံအရှပေို့ငျးက နှမျးပါးတဲ့ မတ်ေတာသင်ျဂဟ သာရေး နာရေး ကူညီမှူအသငျးကပါခငျဗြာ ။ သုဘရာဇာမငျးဒငျ သရဲလဲမကွောကျတတျဘူး ဆိုပမေယျ့ တဈခါတဈလမှောတော့ သုဘရာဇာကွီးတဈယောကျ ဇောခြှေးပွနျခဲ့ရတဲ့အဖွဈလေးကို ဖောကျသညျခပြါရစေ....။
၁၃ . ဖျောဖျေါဝါရီလ. ၂၀၁၇ ခုနှဈ.........
အခြိနျက... ည7: 45 မိနဈ ....
" ဟယျလို..... မင်ျဂလာပါညီလေး.... "
" ညီလေးရေ.... လူနာလမျးကွောငျးသှားပေးလို့ရမလား.... "
ရှသေံလငျြ နာရေးကူညီမှူအသငျး ဥက်ကဌ ဦးအောငျခိုငျဝငျးက ဖုနျးလှမျးဆကျပွီး အကူအညီတောငျးလာပါတယျ ။
" ရပါတယျအကိုကွီး.... ကြှနျတော့မှာ နာရေးကားရော ( ၁၃ ) သှေးလူငယျ လူနာတငျကားရော အသငျ့ပါခငျဗြာ "
" အကိုက မနကျမှာ လူနာသှားကွိုရမှာမို့လို့ပါညီလေး... ညီလေးတို့ဖုနျးကို အကိုလှဲပေးလိုကျမယျနျော "
" ဟုတျကဲ့ အကို... လှဲပေးလိုကျပါ... "
" ကြေးဇူးပါညီလေး...မင်ျဂလာပါ "
" မင်ျဂလာပါအကိုကွီး... "
" ဟယျလို.... မတ်ေတာသင်ျဂဟက အသငျးကပါလားခငျဗြာ... "
" မင်ျဂလာပါခငျဗြာ....ဘာမြားအကူအညီပေးရမလဲခငျဗြာ... "
" ကြှနျတျော့အဒျေါကို ဗဟိုအမြိုးသမီးဆေးရုံက လကျလြှော့လိုကျလို့ ရှာကိုပွနျချေါသှားခငျြလို့ပါဗြာ... ပိုကျဆံလဲ သိပျမတတျနိုငျဘူး...အကိုတို့အသငျးက ကားကူညီပေးခ ဘယျလောကျပေးရမလဲခငျဗြာ "
" ဟာ....အကို...ကြှနျတျောတို့ အသငျးက ငှတေနျဖိုးမသတျမမှတျထားပါဘူးခငျဗြာ... အသှားအပွနျ ကားဆီဖိုး လှူပေးရငျရပါပွီခငျဗြ "
"ကြေးဇူးတငျလိုကျတာဗြာ..... ကြှနျတျော အမြိုးသမီးဆေးရုံကွီးကစောငျ့နပေါ့မယျအကို...ကူညီပေးပါခငျဗြာ "
" စိတျခပြါခငျဗြာ...ကြှနျတျောတို့က ဒဂုံအရှကေ့နေ အအလုံမွို့နယျအထိလာရမှာဆိုတော့ တဈနာရီလောကျတော့ကွာမယျနျော...အကို.. "
" ရပါတယျအကို...ကြှနျတျော စောငျ့နပေါ့မယျ... "
ညရှဈနာရီခှဲ လောကျမှာတော့ သှေးလူငယျ သှေးလှူရှငျအသငျးက လူနာတငျယာဉျရောကျလာခဲ့ပါတော့တယျ ။
" အကိုကွီး...ကြှနျတျောတို့ အဆငျသငျ့ပဲ... သှားကွမယျလေ... "
သှေးလူငယျ ကိုခငျဇျောကလဲ တကျတကျကွှကွှနဲ့ အသငျ့ရှိနပေါတယျ ။
" အေး...ခငျဇျော... ငါဆေးရုံကို ဖုနျးလှမျးဆကျလိုကျဦီးမယျ "
ကိုခငျဇျောကို လှမျးပွောပွီးတာနဲ့ ခကျြခငျြးဆိုသလိုပဲ အကူအညီတောငျးထားတဲ့သူဆီကို ခကျြခငျြးဖုနျးလှမျးချေါလိုကျပါတယျ ။
" ဟယျလို....မတ်ေတာသင်ျဂဟ အသငျးကပါခငျဗြာ...ကြှနျတျောတို့ ထှကျလာတော့မယျဆိုတဲ့ အကွောငျးအသိပေးတာပါ "
" ဟုတျကဲ့...အကိုရေ...အဒျေါက အခုလေးတငျပဲ ဆုံးသှားပွီဗြာ...ရှငျရှငျ သသေေ ရှာကိုပဲ ပွနျချေါသှာခငျြပါတယျအကို... "
" ဒါဆိုလဲရတယျလေ...ကြှနျတျောတို့ နာရေးကားနဲ့ ထှကျလာခဲ့မယျ...စောငျ့နဗြော "
" ဟုတျကဲ့အကို...ကြေးဇူးအရမျးတငျပါတယျဗြာ "
ဖုနျးခလြိုကျပွီးတာနဲ့ ကြှနျတျော့ရဲ့ ရငျဘတျတူ ညီနောငျတျောတှကေို အသိပေးရပါပွီ ။
" ကဲ...ကိုယျ့ဆရာတို့ရေ...လူနာမဟုတျတော့ဘူး....လူသဖွေဈသှားပွီ "
" သသေေ ရှငျရှငျဗြာ...အကူအညီတောငျးရငျတော့ သှားရမှာပဲ....လိုကျမယျအကိုရာ...သှားကွတာပေါ့ "
အဖွူရောငျ ပရဟိတ ရအေလှူအသငျးက ကိုခိုငျစိုးကလညျး လိုကျမယျတကဲကဲ ဖွဈနလေသေညျ ။
" ကဲ...ဒီတဈကွောငျးကတော့... အတှအေ့ကွုံလိုခငျြတဲ့သူကမြားနတေော့ အသငျးအင်ျကြီတှကေလဲ မရှိတော့ဘူး...ကိုယျ့အသငျးဝတျစုံတှနေဲ့ ပဲ လိုကျခဲ့ကွတော့ဗြာ... "
အသငျးကနေ ကားစထှကျတော့ ညကိုးနာရီထိုးပါတော့မယျ ။ အလုံမွို့နယျအထိသှားရမှာဆိုတော့ ညဆယျနာရီလောကျမှ ရောကျမယျဆိုတော့ နောကျအရမျးကမြှာကိုစိုးရိမျစိတျကဝငျလာပါတော့တယျ ။
" ကဲ...ကဲ...ကားပျေါတကျတော့ဟေ့... မတ်ေတာသင်ျဂဟရယျ...အဖွူရောငျရယျ..သှေးလူငယျရယျ...သုံးသငျး...သုံးယောကျပေါ့ကှာ... "
သှေးလူငယျ ခငျဇျောက ကားမောငျး...၊ ကြှနျတျောက တာဝနျခံဆိုတော့ ရှဆေုံ့းမှာထိုငျပွီး အဖွူရောငျ ကိုခိုငျစိုးက အနောကျမှာ ထိုငျပွီး စတငျထှကျခှာလာခဲ့ပါတော့တယျ ။ လကျပါတျနာရီကိုလှမျးကွညျ့မိတော့ ညကိုးနာရီ ထိုးပါပွီ ။
" အကိုလုပျလဗြော...မနောရဲ့အသံလေး... "
" ကားမောငျးနရေငျးမှ လှမျးပွောလိုကျတဲ့ ကိုခငျဇျောကို လှမျးကွညျ့မိပွီး မနောသီခငျြးဖှငျ့ဖို့အတှကျ မသှေ့ားတာကို သတိထားလိုကျမိပါတယျ ။
" ကဲ...ကဲ...ဖှငျ့ပွီဟေ့... "
" ပရတေံ......ဟိတံ...ပရဟိတံ...ပရကေံ...ဟိကံ...ပရဟိကံ...သူတဈပါးတို့ရဲ့ အကြိုးကိုဆောငျရှကျကွခွငျးသညျ....ပရဟိတ လုပျငနျးဟုချေါသညျ "
မနောရဲ့ သီခငျြးသံလေးက ကားထဲမှာ ပြံ့လှငျ့နသေလို ကြှနျတျောတို့ ရငျဘတျတူ ညီအကိုမြားရဲ့ ရငျထဲမှာလညျး ကွညျ့နူးတကျကွှနတေဲ့စိတျတှေ လြှံထှကျနပေါတော့တယျ ။
" အကို.... ရောကျခါနီးပွီလား.... "
အကူအညီတောငျးထားသူဆီက ဖုနျးဝငျလာတာတှတေ့ာနဲ့ ခကျြခငျြးပဲ ပွနျဖွလေိုကျပါတယျ ။
" ဟုတျကဲ့အကို...ရောကျခါနီးပါပွီ.....ဆေးရုံအဝက စောငျ့ပေးပါခငျဗြာ "
အလုံမွို့နယျ ဗဟိုအမြိုးသမီးဆေးရုံကိုရောကျတော့ ညဆယျနာရီထိုးပါတော့မယျ...။ ဆေးရုံဝငျပေါကျကို ကားကှဝေ့ငျလိုကျတယျဆိုရငျပဲ ဆေးရုံရဲ့ အပေါကျဝအရှမှေ့ာ လူလေးငါးခွောကျယောကျလောကျ စုပွုံစောငျ့နကွေတာ တှလေို့ကျရပါတယျ ။ လူအုပျစုထဲက အဝတျအစား ခပျနှမျးနှမျးနဲ့ အသကျသုံးဆယျဝနျးကငျြလောကျရှိမယျ့ အမြိုးသားတဈယောကျက လကျပွနှူတျဆကျပါတယျ ။
" ကြှနျတျော့နံမညျ စံမောငျပါအကို... ဆေးရုံက အကိုတို့ အသငျးရဲ့ ဖုနျးနံပါတျပေးလို့ အကို့ကိုအကူအညီလှမျးတောငျးလိုကျရတာပါ "
ကိုစံမောငျရဲ့ အနောကျကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ အမြိုးသမီးတဈယောကျ..အမြိုးသားလေးယောကျ..ကိုစံမောငျအပါအဝငျဆိုရငျ ခွောကျယောကျဖွဈနပေါတယျ ။
" ကိုစံမောငျ....ခငျဗြားတို့က နာရေးရှငျတှလေား... ကားနဲ့ ဘယျနှဈယောကျလိုကျမှာလဲ "
" ဆုံးသှားတာ ကြှနျတျောတို့ အဒျေါပါ...ကြှနျတျောတို့က တူတှေ တူမတှပေါအကို... "
" ခငျဗြားတို့က ဘယျနှဈယောကျပွနျလိုကျကွမှာလဲဗြ... "
" ဖွဈနိုငျရငျ အကုနျလုံးလိုကျခငျြပါတယျအကို... "
" ဗြာ.... ခွောကျယောကျလုံး...ဟုတျလား..... ကြှနျတျောတို့ကားက နယျဝေးကာယကံရှငျ သုံးဦးထကျ ပိုလိုကျခှငျ့မပေးဘူးဗြ "
" လုပျပါအကိုရယျ...ဒီအခြိနျ မျောကြှနျးကိုကားငှားပွနျဖို့ မဖွဈနိုငျလို့ပါ...။ အငှားကားက တဈသိနျးတောငျးတယျအကို... အခွားနာရေးကားလဲ မေးကွညျ့ပွီးပွီ... သုံးသိနျးခှဲတဲ့အကိုရာ...ကြှနျတျောတို့အဲဒီလောကျမတတျနိုငျဘူးအကို.... လုပျပါအကို...ဖွဈသလိုလိုကျပါ့မယျ "
ကြှနျတျောစဉျးစားရအတျောကပျြမိပါတယျ ။ ထားခဲ့ရပွနျရငျလဲ သူတို့အတှကျ ကွုံရမယျ့ အခကျအခဲကို ကိုယျခငျြးစာမိသလို...ချေါသှားပွနျရငျလညျး ကားထဲမှာ လူသအေလောငျးရယျ... ကြှနျတျောတို့တှရေယျဆို..ကပျြညပျနတေော့မယျ ။ ဆုံးဖွတျခကျြကို အမွနျဆုံးခနြိုငျဖို့အတှကျ ကြှနျတျောအလြှငျအမွနျစဉျးစားရပါတော့တယျ ။
" ခငျဇျော....ညီလေး.... အသှားအပွနျ မငျးတဈယောကျထဲ မောငျးလို့ဖွဈမလား... "
" ရတယျအကို.... သှားကွမယျ...၊ အရမျးနောကျကသြှားရငျ ရှာထဲကို သူတို့ ဝငျဖို့ခကျသှားလိမျ့မယျထငျတယျအကို "
" ကဲ...ဒါဆိုလဲ...အလောငျးသှားထုတျတော့...၊ ကနျြတဲ့လူတှကေ ပစ်စညျးတှတေငျတော့....ကွာတယျကှာ.....လကျအိတျတှစှေပျပွီး အလောငျးကို အခေါငျးထဲထညျ့ကွတော့... "
လိုအပျတာတှေ စီစဉျနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ နာရေးရှငျတှကေ ဘာမပွောညာမပွောနဲ့ ကားထဲဝငျပွီးနရောယူနကွေပါပွီ ။ ကြှနျတျော့စိတျထဲမှာ ထောငျးကနဲနအေောငျ စိတျတိုသှားမိပါတယျ ။
" ဟာ..... ဟလေူ့တှေ..... ခငျဗြားတို့က ကိုယျ့မသာကိုအရငျမတငျပဲ ခငျဗြားတို့က နရောအရငျဝငျယူနတော ခငျဗြားတို့ကမသာတှလေား...အကုနျပွနျဆငျးကွဗြာ "
ကြှနျတျော့ရဲ့ ရငျထဲကပေါကျကှဲမှူတှကေ စကားလုံးအဖွဈနဲ့ ထှကျသှားခဲ့ပါပွီ ။ ကြှနျတျော့ရဲ့ ပေါကျကှဲမှူသံစဉျကွောငျ့ သူတို့မှာလဲ ကွောငျတောငျတောငျနဲ့ပွနျဆငျးလာကွတယျ ။ တဒင်ျဂစိတျကွောငျ့ ပွောလိုကျတဲ့စကားကို နောငျတရလျိုမိသလို သူတို့ကိုကွညျ့ပွီးတော့လညျး စိတျမကောငျးဖွဈမိပွနျပါတယျ ။ ကြှနျတျောလဲ မကျြနှာကို ခကျြခငျြးပွနျပွငျပွီးတော့ သူတို့ကို အကူအညီပေးဖို့ ပွောရပါတော့တယျ ။
" ကဲ...ကဲ...အမြိုးသားတှေ....ကြှနျတျောတို့ကိုကူညီပွီး အလောငျးကိုဝိုငျးသယျပေးကွပါဦး.... ပွီးမှ နရောခပြေးပါ့မယျ... "
ဆေးရုံဝနျထမျးတှေ တငျလာတဲ့ ကုတငျပျေါက ဒျေါကွညျဌေး ( ၅၈ ) နှဈ ရုပျအလောငျးကို မှနျခေါငျးထဲထညျ့ပွီး တာနဲ့ စတီးဗနျးပျေါတငျ...ကားထဲက စတီးဘောကျဈထဲကိုထညျ့ပွီးတာနဲ့ ကားနောကျဖုံးတံခါးကို အားနဲ့ ပိတျခလြိုကျပါတော့တယျ ။
" ဂြိမျး... "
" ကဲ...အလောငျးတော့ တငျပွီးပွီ...ကြှနျတျောနရောခပြေးမယျ...။ ဟိုပိနျပိနျနဲ့ အကိုက သသှေားတဲ့ အဒျေါထကျ အသကျကွီးလား.... "
" ဟုတျကဲ့ဆရာ...သသှေားတဲ့ မကွညျဌေးက ကြှနျတျော့ညီမပါ "
" ကောငျးလိုကျလဗြော.... ဆေးရုံစောငျ့ရတော့ ခငျဗြားလဲ ပငျပနျးနမှောပေါ့....၊ အားလုံးအဆငျပွသှေားအောငျ စတီးဘောကျဈကွီးပျေါအိပျဗြာ... ဘောကျဈကွီးက ကုတငျလိုပါပဲ...၊ ကိုယျထငျရငျ ကုတငျရှနေနျးလို့တောငျပွောကွသေးတာပဲဗြာ...။ အဲဒီအပျေါမှာ ခေါငျးအုံးလေးတဈလုံးနဲ့ အိပျပွီးသာလိုကျလာခဲ့တော့ဗြာ...ဖွဈတယျမဟုတျလား... "
" ရပါတယျဆရာ...ကြှနျတျောလဲ အိပျခငျြနတောနဲ့ အတျောပဲ... "
" ဒါဆိုလဲ တကျတော့ဗြာ... "
" စတီးဘောကျဈရဲ့ဘေးမှာ ဆိုဖာတဈစုံရှိတယျ... နောကျနှဈယောကျက တကျထိုငျလိုကျဗြာ... ဆိုဖာခုံရှကေ့ ပလပျစတဈနောကျမှီထိုငျခုံလေးမှာ ဒီကညီမကဝငျထိုငျလိုကျဗြာ...၊ ယာဉျမောငျးနောကျဖကျမှာ ထိုငျခုံတှနေဲ့ ကိုခိုငျစိုးရယျ နောကျနှဈယောကျရယျက ဝငျထိုငျလိုကျဗြာ.... "
နာရေးကူညီမှူ အတှကျ တာဝနျခံလုပျတာနဲ့တငျမလုံလောကျတော့ စပါယျယာလုပျပွီး နရောခခြဲ့ရပါတယျ....။ အားလုံးအဆငျသငျ့ဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ ဆေးရုံက ဝနျထမျးတှကေို လကျအုပျခြီပွီးနှူတျဆကျပွီးတာနဲ့ ကားစထှကျလာခဲ့ပါတော့တယျ ။
" ဆရာတို့ ဆရာမတို့..ကြှနျတျောတို့သှားပွီဗြာ.... "
" အကိုရေ...ပွဿနာပဲဗြာ... "
ခပျတိုးတိုးပွောလာတဲ့ ကိုခငျဇျောရဲ့ စကားကွောငျ့ ကြှနျတျော အံ့အားသငျ့ပွီး သူ့ကိုပွနျမေးမိပါတယျ ။
" ဘာဖွဈလို့လဲညီလေး....ဆီကုနျခါနီးပွီလား...ညနကေပဲ သုံးသောငျးဖိုးထညျ့ထားတယျလကှော... "
" မဟုတျဖူးအကို...သူတို့ကခွောကျယောကျ...ကြှနျတျောတို့က သုံးယောကျဆိုတော့ ကိုးယောကျဖွဈနတေယျလဗြော ..အမွနျလမျးက အံစာတုံးကို သှားသတိရမိလို့ပါ "
ကိုခငျဇျောပွောမှပဲသတိထားမိပွီး ဟုတျသလိုလိုထငျနရောက တဈခုစဉျးစားမိပွီး ပွုံးလိုကျမိပါတယျ ။
" ညီလေးကလဲကှာ...သူတို့ကခွောကျယောကျ..ကိုတို့က သုံးယောကျ...မသာကတဈယောကျလကှော... ပေါငျးဆယျရောကျပေါ့..မဟုတျဖူးလား... "
" ဟာ...အကိုကလဲ...အထဲက သနေတောလေ... "
" အေးလေ...သူလဲ တဈယောကျပေါ့ကှာ... "
ကြှနျတျောပွောလိုကျတဲ့စကားကို ကိုခငျဇျောနားလညျသှားတာကွောငျ့ ပွုံးပွီး ကားကိုဆကျမောငျးသှားပါတော့တယျ ။
လှိူငျသာယာဘကျရောကျတော့ ည ဆယျ့တဈနာရီ ကြျောပါပွီ ။ လမျးဘေး ဝဲယာ တဈဖကျတဈခကျြမှာတော့ အလုပျပွနျတဲ့သူတှေ.... ကားစောငျ့နတေဲ့သူတှေ.... လကျထဲမှာ အထပျလေးဆှဲပွီး သိုငျးကှကျနငျးနတေဲ့သူတှေ နဲ့ မွို့ပွရဲ့ အိပျတနျးတကျကွတော့မယျ့သူတှကေို ငေးမောနမေိရငျးက အနောကျက နာရေးရှငျတှကေို လှမျးမေးလိုကျပါတယျ ။
" အဆငျပွကွေရဲ့လားဗြ.... ဘာရောဂါနဲ့ ဆုံးတာလဲ ...ရှာကည အခြိနျပွနျသယျလာတာလကျခံရဲ့လား..... " ဆိုတဲ့ အလာပ သလာပ တှမေေးမွနျးရငျးနဲ့ပဲ.....မအူပငျတံတားကွီးကိုဖွတျပွီး မအူပငျမွို့ထဲကိုဝငျရောကျလာခဲ့ပါပွီ ။ နာရီကွညျ့လိုကျတော့ ညသနျးခေါငျကြျောလှနျပွီး နသေ့ဈရဲ့အစ မနကျတဈနာရီထိုးနပေါပွီ ။
" ကိုယျ့ဆရာတို့....မအူပငျကြျောလို့ မှျောကြှနျးကိုရောကျရငျ ဘယျခြိုး ညာခြိုးပွောပေးကွဦးနျော.... "
" ဗြာ...အခု ဘယျနားရောကျနပွေီလဲ "
" မျောကြှနျးရောကျတော့မယျဗြ... "
" လိုသေးတယျဆရာ...မျောကြှနျးကနေ နောကျတဈနာရီလောကျ ထပျမောငျးရဦးမယျခငျဗြ... "
" ခငျဗြားက အခြိနျမှနျးတာ ကြှမျးကငျြလှပါလား "
" ကြှနျတျောက ကြိုကျပိကနေ မအူပငျကို ကားလိုကျတယျခငျဗြ "
" ဒါနဲ့.... ကြှနျတျောတို့က အလောငျးကို ရှာထဲမောငျးပို့ရမှာလား "
" မဟုတျဖူးဆရာ...ကြိုကျပိနားရောကျရငျ သင်ျခြိုငျးကုနျးကိုတှလေိ့မျ့မယျ ။ ညာဘကျမှာခြောငျး...ဘယျဘကျမှာလယျကှငျး ရှိတယျ ။ ကြိုကျပိတံတားနားရောကျရငျ ကြှနျတျောတို့ကို ပဲ့ထောငျနဲ့ လာကွိုကွမှာဆရာ....။ ကြှနျတျောတို့နတေဲ့ ကညငျညောငျးရှာက ခြောငျးရဲ့ တဈဖကျကမျးမှာပါဆရာ "
" ဟုတျပွီ...ဒါဆိုရငျလဲ လာကွိုမယျ့သူတှကေို ဖုနျးကွိုဆကျထားလိုကျဦး "
" အေး....ဟုတျတယျကှ.... မောငျနီတို့ကို လှမျးဆကျထားလိုကျဦးလကှော.... နောကျပွီးတော့ လမျးမှာ ငါပွောထားတာ ဆရာတို့ကိုလဲ ပွောပွလိုကျဦး "
" နပေါဦးဟ...ဆငျးတော့မှ ပွောမှာပေါ့ကှ "
သူတို့ဘာပွောခငျြမှနျးမသိပမေယျ့ ကြှနျတျော့ရဲ့ စိတျထဲမှာ ငှကွေေးအခကျအခဲကိုပွောခငျြနပေုံရတယျလို့ထငျလိုကျမိတယျ ။
" ဟလေူ့တှေ...ကားဆီဖိုးက အသှားအပွနျ ခွောကျသောငျးလောကျပဲကမြှာဗြ...အဆငျမပွဘေူးဆိုလဲပွောနျော...အားမနာနဲ့..ကြှနျတျောတို့လှူသငျ့ရငျ လှူမှာပါ "
" ပိုကျဆံကပါ ပါတယျဆရာ..ကြှနျတျောတို့ရောကျတော့မှပဲပွောပွပါ့မယျ ...ကြေးဇူးလဲတငျပါတယျ.. "
" တဈလမျးလုံးကြေးဇူးတငျလာလိုကျတာ...ခငျဗြားတို့ဆီကကြေးဇူးကို မအူပငျရောကျမှပဲ ထမငျးနဲ့ ကွျောစားပဈလိုကျတော့မယျ...ဟား..ဟား... "
ရယျရယျမောမောဖွငျ့ ပွောလိုကျသော ကြှနျတျော့စကားကွောငျ့ အားလုံးလနျးဆနျးသှားကာ နိုးကွားလာကွလပွေီ ။ ကြှနျတျော့ဖုနျးက ဂြီပီအကျဈကိုဖှငျ့လိုကျတော့ ကြိုကျပိကိုရောကျတော့မယျဆိုတာ သိလိုကျရပါတယျ ။ အခြိနျကတော့ မနကျနှဈနာရီကြျောနပေါပွီ ။ ဘယျဖကျမှာတော့ သင်ျခြိုငျးကုနျးကိုမွငျနရေပွီး ခြောငျးရပွေငျနှငျ့ လယျကှငျးပွငျကွီးကို တရိပျရိပျဖွတျကြျောနပေါတယျ ။ လမျးရဲ့ ဘယျဖကျအခွမျးမှာ အကာမရှိတဲ့ လယျစောငျ့တဲတဈလုံးကလှဲလို့ ခွုံငယျပငျပုတှတေောငျ မရှိဘူးဆိုတာ သတိထားလိုကျမိပါတယျ ။ စိတျထဲတော့ မသိုးမသနျ့ဖွဈသလိုခံစားနရေပါတယျ ။ ဘာရယျလို့တော့ အတိအကပြွောလို့မရတဲ့ ခံစားခကျြပေါ့ ။
ကားကို ရုတျတရကျ ဘယျဖကျကှလေို့ကျတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ရှခေ့ပျလှမျးလှမျးမှာ ဓာတျမီးရောငျကိုလှမျးတှလေို့ကျရပါတယျ ။
" ဟလေူ့တှေ... ရှမှေ့ာ ဓာတျမီးရောငျတှပွေီ့...ကုနျးပျေါမှာ ခငျဗြားတို့လူတှလေား... "
" ဟုတျမယျဆရာ...အဲဒါကုနျးမဟုတျဖူး....တံတားပါ...။ ဘယျဖကျမှာ ပဲ့ထောငျရပျထားလိမျ့မယျထငျတယျဆရာ...
တှပေ့ါပွီ.... ရှမှေ့ာ လူလေးငါးယောကျ ဓာတျမီးနဲ့ ထိုးပွီး ကားကို ဘယျဖကျ ကပျရပျဖို့ အခကျြပွနပေါတယျ ။ အဲဒီနရောရောကျတာနဲ့ ကိုခငျဇျောကလညျး ကားကို တံတားပျေါအထိတကျပွီး နောကျပွနျလှညျ့ကာ အပွနျလမျးကိုဦးတညျပွီး ရပျလိုကျပါတယျ ။ ကားရပျလိုကျတာနဲ့ တဈပွိုငျနကျထဲဆိုသလို ကားပျေါပါလာတဲ့ လူတှကေ ကားမီးတှပေိတျပေးဖို့ တိုးတိုးတိတျတိတျ ပွောပါတယျ ။ လိုရာခရီးရောကျနပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ ဘာကွောငျ့လဲ....ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတဲ့မေးခှနျးတှေ မေးမနတေော့ပါဘူး ။ ကြှနျတျောတို့ အဖှဲ့ ကားအောကျကိုဆငျးပွီး လုပျစရာရှိတာဆကျလုပျကွပါတယျ ။ ကားနောကျဖုံးကိုဖှငျ့ပွီး မှနျခေါငျးကိုဆှဲထုတျလိုကျကာ အခေါငျးဖုံးကိုဖှငျ့ပေးလိုကျပါတယျ ။
" ကဲ....လာကွဗြာ..... အားကောငျးတဲ့သူတှကေ အရှေ့ အလယျ....သသေခြောခြာမထုတျကွပတေော့ဗြာ "
" ရပါတယျ...သိပျမလေးပါဘူး.... "
" ဟကေ့ောငျ...သိပျမလေးဘူးသာပွောတာ... လေးတယျကှ... "
" ဟာ...ဟကေ့ောငျ...ဖွေးဖွေးလုပျကှ... "
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ကွားရုံလောကျ အသံမတိုးမကယျြပွောရငျး တဖွေးဖွေးနဲ့ တံတားအောကျဖကျ ဆငျခွလြှေောလမျးအတုငျး လှရှေိရာကို သယျသှားကွပါပွီ ။ ကားပျေါမှာတော့ နာရေးရှငျနှဈယောကျနဲ့ .. ကိုခငျဇျော ကိုခိုငျစိုးတို့နှဈယောကျ အသငျးအတှကျ အလှူငှေ...ဆီဖိုးကို မှတျတမျးရေးပွီး လကျခံနကွေပါတယျ ။ ကြှနျတျောကတော့ ကားနားမှာ ကနျြနခေဲ့တဲ့ ရှာသားအခြို့နဲ့ မှနျအခေါငျးကို စတီးဘောကျဈထဲ ပွနျထညျ့ပွီး နောကျတံခါးကိုပွနျပိတျရငျး အလုပျကို လကျစသတျလိုကျပါတော့တယျ ။
" အကိုကွီးတို့ကို ကြေးဇူးအရမျးတငျပါတယျ..ရှိခိုးပွီးကနျတော့ပါတယျဗြာ... "
နာရေးရှငျ ကိုစံမောငျက လကျအုပျလေးခြီပွီး ကြေးဇူးတငျစကားပွောနတောကိုကွညျ့ပွီး ပီတိဖွဈလိုကျမိပါတယျ ။
" ရပါတယျဗြာ... ကြှနျတျောတို့ အသငျးရဲ့ ဝတ်တရားက လူမြိုးဘာသာ...ဆငျးရဲခမျြးသာမရှေးပဲ... လူမှူရေးလုပျနတေဲ့ အသငျးပါ ....ကဲ...ကဲ...ကြှနျတျောတို့လဲ ရနျကုနျပွနျရဦးမှာ...ဗိုကျလဲဆာနပွေီ... မအူပငျရောကျမှပဲ ထမငျးဝငျစားတော့မယျ... သှားပွီဗြို့ "
" အကို...အကို.....ခဏလေး... "
" ဘာလဲဗြ..ကိုစံမောငျ... "
" ဟိုလေ... ဒီရောကျမှပွောမယျဆိုတဲ့ ကိစ်စလေ...အအဲဒါပွောမလို့ "
" အေး....ဟုတျသားပဲ...ဘာပွောမလို့လဲ ကိုစံမောငျ... "
" အကိုတို့ပွနျရငျ မျောကြှနျးမွို့အစပျနားမရောကျခငျ လမျးမှာကားကွုံတားရငျ မရပျပေးနဲ့နျော...ပုံမှနျလေးသာမောငျးသှားပါ "
" ဟာ...ဘာတုနျးဗြ.... ခငျဗြားဟာကလဲ ... ကြှနျတျောတို့ နရောအနှံ့လြှောကျသှားနတော ဘာမှမဖွဈပါဘူးဗြာ....လုယကျရငျတောငျမှ အလှူငှနေဲ့ အခေါငျးပဲပေးလို့ရမှာ... လိုခငျြရငျလဲ ပေးလိုကျရုံပေါ့ဗြာ... ကဲ..ကဲ..သှားပွီဗြို့... ညီလေးခငျဇျောရေ...မောငျးတော့ "
အမှောငျထဲမှာ လကျကာပွရငျးကနျြခဲ့သော ကိုစံမောငျတို့က တဖွေးဖွေးဖွငျ့ကနျြရဈခဲ့ကွလပွေီ ။
" အကို.... ဒီလူပွောတာ ဘာအဓိပ်ပါယျလဲမသိဘူးနျော "
" ခငျဇျော....မငျးကလဲ ဘာကိုကွောကျနတောလဲ... ဒလမှာ ကုလားမကွီးကို ညနစေောငျးကွီး ရငျဘတျခြုပျရိုးတှဖွေညျပွီး ကလီစာတှထေုတျ...ဆေးညျ့ပွီးပွနျခြုပျပေးခဲ့တာတောငျဘာမှမဖွဈခဲ့တာ....ဘာကွောကျနတောလဲ...ရှကေို့သာ ဂရုစိုကျပွီး ကွညျ့မောငျးကှာ... "
ကားထှကျလာပွီး သိပျမကွာခငျလောကျမှာပဲ ကားလမျးရဲ့ ဘယျဖကျခွမျးမှာ အနီရောငျဝတျနဲ့ လူလို့ထငျရတဲ့ အရာကို ကားမီးရောငျအောကျမှာ လှမျးမွငျလိုကျရပါတယျ ။ ခရီးဆုံးရငျ လုပျလလေု့ပျထရှိတဲ့အတိုငျး ဂြီပီအကျဈကိုဖှငျ့ပွီး ကိုယျရောကျတဲ့နရောကို စခရငျရှော့ ရိုကျလိုကျပါတယျ ။ တဈလကျစထဲ မွငျနရေတဲ့ အရာကို ဖုနျးကငျမရာနဲ့ အနီးဆှဲပွီး ဓါတျပုံလှမျးရိုကျလိုကျမိတယျ ။ ကားရှမေီ့းရောငျက မှနျကနအေလငျးပွနျတော့ ပုံကသိပျမသဲကှဲဘူးဖွဈနပေါတယျ ။ ဒါနဲ့ပဲ ကားဘေးမှနျကိုဖှငျ့... ခေါငျးကိုထှကျပွီး မွငျနရေတဲ့ အရာကို ဓါတျပုံလှမျးရိုကျလိုကျပါတယျ ။
" ခငျဇျောရေ.... ရှမှေ့ာ အမြိုးသမီးတဈယောကကျကှ...ငါတို့တှနေ့ကြေ ဂေါကျသီးတှလေားမသိဘူး...ဟှနျးတီးလိုကျပါဦးကှာ...အရှိနျလဲနညျးနညျးလြှော့ထားကှ...၊ သူဂေါကျတာကအရေးမကွီးဘူး... တို့တှထေောငျထဲရောကျကုနျမယျ... "
" ပှမျ...ပှမျ... "
ကားဟှနျးသံပေးလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာပဲ ရုတျတရကျဆိုသလို ကားမီးရောငျအောကျကနေ ပြောကျသှားပါတယျ ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ကားက ညာဖကျနညျးနညျးခြိုးကှလေို့ကျရတဲ့အတှကျ ကားမီးရောငျက ညာဖကျမှာပဲရှိပါတယျ ။
" ခငျဇျော...ရပျရပျ...ညီလေး...ဒီအရူးမ ကားဟှနျးသံကိုကွောကျလနျ့ပွီး ရထေဲခုနျခသြှားရငျတော့ ဒုက်ခပဲကှ... "
ကားရပျတာနဲ့ တပွိုငျနကျထဲ ကားတံခါးကိုဖှငျ့ပွီး ကားလမျးဘေးကနေ ငါးပအေကှာလောကျခြောငျးကိုဆငျးကွညျ့လိုကျပါတယျ ။
" ခငျဇျောရေ... ကားကိုညာဖကျ နညျးနညျးခြိုးပွီး မီးထိုးပေးစမျးကှာ.. "
ကိုခငျဇျောက ကားကို ညာဖကျခြိုးပွီး ကားမီးကွီးနဲ့ ထိုးပေးလိုကျပါတယျ ။
ကားမီးရောငျကွောငျ့ ပါတျဝနျးကငျြတဈခုလုံးကို ထငျထငျရှားရှားမွငျနရေပါပွီ ။ ရပွေငျတဈခုလုံး ငွိမျသကျနတေဲ့အပွငျ ဘာလှူပျရှားမှူကိုမှလဲမတှရေ့တဲ့အတှကျ ခေါငျးနပနျးတဈခုလုံကွီးပွီး ဆံပငျမှေးတှထေောငျထလာပါတော့တယျ ။ လူနအေိမျခွဆေိုလို့ တဈခုတဈလတေောငျမရှိတဲ့နရော...။ အရူးမ ဖွဈစဦေးတော့ ဒီလိုနရောကို လမျးလြှောကျလာဖို့ဆိုတာ လုံးဝကိုမဖွဈနိုငျတာ ကြှနျတျောသတိထားလိုကျမိပါတယျ ။
" ဟငျ...ဘုရားရေ... ဘာမှလဲမတှပေ့ါလား... "
ကြှနျတျော့နှာခေါငျးထဲကို ပုပျအဲ့အဲ့အနံ့ကထောငျးကနဲဝငျလာပါတယျ ။ နာရေးတှလေုပျကိုငျနရေတဲ့သူ...သင်ျခြိုငျးနဲ့ ထိတှနေ့ရေတဲ့သူဆိုတော့ ဒီအနံ့ဟာ လူသကေောငျပုပျနံ့ဆိုတာ သိလိုကျပါတယျ ။ လူသအေလောငျးတှကေို ထိတှကေို့ငျတှယျနရေတာမကွောကျခဲ့ပါဘူး ။ သရဲဆိုတာလဲ ကိုယျတှတေဈခါမှမမွငျဖူးခဲ့တာကွောငျ့ ဘယျလိုဆိုတာကို သိလဲမသိပါဘူး... ။ အခုဏကမွငျလိုကျရတဲ့ မွငျလိုကျရတဲ့အရာဟာ လူစငျစဈမဟုတျကွောငျးသကျသပွေနပေါပွီ ။
မွငျလိုကျရတဲ့မွငျကှငျးက ကွကျသီးမှေးညငျးတှထေပွီး ဆံပငျမှေးတှထေောငျထရလောကျအောငျပါပဲ...။ ခပျလှမျးလှမျးကနေ ရုတျတရကျပျေါလာတဲ့ အနီရောငျနဲ့ အမြိုးသမီး... ခေါငျးပွတျကွီးနဲ့...။
" အကို...ပွနျတကျခဲ့တော့...သိပျမဟုတျတော့ဘူး... "
ကိုခငျဇျောပွောတာ နောကျကနြပေါပွီ... ကိုခငျဇျောလှမျးပွောတဲ့အခြိနျမှာတငျ ကြှနျတျော ကားပျေါရောကျပွီး တံခါးကိုပိတျပွီးနပေါပွီ ။
" မောငျး...မောငျး..ညီလေး....ဘယျညာကိုသိပျမကွညျ့နဲ့ကှာ...ရှကေို့ပဲ အာရုံစိုကျပွီးသတိထားမောငျး "
ကိုခငျဇျောလဲ အခွအေနကေိုရိပျမိလိုကျပုံရပါတယျ...။ ကားကိုခကျြခငျြးမောငျးထှကျလိုကျပွီး ညာဖကျကို ခြိုးကှကေ့ာ လမျးအတိုငျးဂရုတစိုကျမောငျးလာခဲ့ပါတယျ...။ ကိုခိုငျစိုးကတော့ ကားနောကျဖကျမှာ အိပျငိုကျနတေော့ ကြှနျတျောတို့ဖွဈပကျြနတောတှေ မသိလိုကျပါဘူး ။ သိပျမကွာတဲ့ အခြိနျမှာပဲ......
" ဟာ..... ညီလေး...ရပျ...ရပျ.... "
လမျးလယျမှာ ကနျ့လနျ့ခံပွီး ခထြားတဲ့ မသာတငျ လေးတိုငျစငျ ကုတငျတဈလုံးကို ဘှားကနဲ တှလေို့ကျရလို့ ကိုခငျဇျောကိုခကျြခငျြးရပျဖို့ အျောပွောလိုကျပါတယျ ။ ကြှနျတျော့ရဲ့ အျောသံနဲ့အတူ ကားကလဲ တုနျ့ကနဲ ထိုးရပျသှားပါတော့တယျ..။
" ကြှီ..... "
" ဟ....ဟ... အကိုဘာဖွဈတာလဲ... "
အနောကျခနျးမှာ အိပျငိုကျပွီးလိုကျလာတဲ့ ကိုခိုငျစိုးက အလနျ့တကွားထပွီး မေးလိုကျပါတယျ ။
" အရှမှေ့ာမွငျတဲ့ အတိုငျးပဲ... ကဲ..ခငျဇျော... မငျးနဲ့ ကိုခိုငျစိုးက အဲဒီမသာစငျကွီးကို ဆငျးဖယျကှာ... ငါဖုနျးနဲ့ မှတျတမျးတငျထားမယျ...၊ မွနျမွနျလုပျကွကှာ... "
ပွောသာပွောနရေတာ... ကိုယျတှကွေုံ့လာခဲ့ရသူဆိုတော့ ကြှနျတျော့ခွထေောကျအောကျပိုငျးတှကေ လေးပွီး လမျးမလြှောကျနိုငျတော့ပါဘူး ။ ကွကျသီးတှထေပွီး နားထငျနားရငျးတှလေဲ ထူပူနပေါတယျ ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ... ကိုခိုငျစိုးနဲ့ ခငျဇျောတို့နှဈယောကျ သှကျသှကျလကျလကျနဲ့ လေးတိုငျစငျကို မ ရှလေို့ကျကွပါတယျ ။ သူတို့လဲ ကြှနျတျော့လိုပဲ ထိတျလနျ့နမေယျထငျပါတယျ ။
သှကျသှကျလကျလကျနဲ့ ရှနေ့ကွေတဲ့ သူတှကေိုလှမျးကွညျ့နရေတာကနေ စိတျထဲမသင်ျကာတာနဲ့ ကြှနျတျောနဲ့ မလှမျးမကမျးကို လှမျးကွညျ့လိုကျမိတယျ ။ အောငျမလေးဗြာ.... ခေါငျးမပါတဲ့သူရဲမက ကြှနျတျောတို့ဆီလြှောကျလာနတေယျ...။
" အောငျမလေးဗြာ... "
နားထဲမှာ မိုးကွိုးပဈခလြိုကျသလိုကွားလိုကျရပွီး တဈကိုယျလုံးမွောကျတကျသှားမတတျပါပဲ...။ ကိုခိုငျစိုးနဲ့ ခငျဇျောတို့နှဈယောကျ ကားတံခါးအမွနျဆှဲပိတျလိုကျသံက လိပျပွာလှငျ့မတတျဖွဈသှားရပါတယျ ။
" ညီလေး...မွနျမွနျမောငျး...မွနျမွနျမောငျး.... ဘယျမှမကွညျ့နဲ့...ရှကေို့ပဲကွညျ့... ဘယျသူတားတားလုံးဝမရပျနဲ့... အရှိနျလဲမလြှော့နဲ့... လမျးလယျမှာဆိုရငျ တိုကျသာပဈကှာ... ဒီနားမှာ လူနအေိမျမရှိဘူးကှ... "
" ဘယျလိုတှေ ဖွဈကုနျမှနျးမသိတော့ပါဘူးဗြာ... "
ကိုခငျဇျောက ညညျးတှားရငျး ကားကို အရှိနျမွှငျ့ပွီး မောငျးပါတော့တယျ ။ ကားနောကျခနျးက အခေါငျးထညျ့တဲ့ စတီးဘောကျစိကွီးကလဲ တဂမျြးဂမျြးနဲ့...ခေါငျးတှလေဲ ပူထူပွီးတော့ သုံးယောကျသား အရှကေို့ပဲ အာရုံစိုကျပွီးမောငျးလာလိုကျတာ... မကျြနှာခငျြးဆိုငျလာတဲ့ ဆိုငျကယျမီး...ကားမီးတှကေိုလဲ ဂရုမစိုကျနိုငျတော့ပဲ ကားထဲမှာ ကမ်ဘာပကျြသလိုဖွဈနပေါပွီ ။
ကြိုကျလတျ...မျောကြှနျး...မအူပငျ မွို့မှ ကွိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့ ဆိုငျးဘုတျတှတေ့ော့မှပဲသကျပွငျးခနြိုငျပါတော့တယျ ။ မအူပငျကားလမျးဆုံရောကျတဲ့ အခါမှာတော့ ညကားတှရေပျတဲ့ ထမငျးဆိုငျရှမှေ့ာ ကားရပျလိုကျတော့မှပဲ စိတျသကျသာရာရပါတော့တယျ ။ စိတျကိုအေးခမျြးသှားတာပါပဲဗြာ...။ မအူပငျရောကျတော့ မနကျလေးနာရီထိုးပါပွီ ။ အဲဒီအကွောငျးကို တှေးကိုမတှေးရဲတော့ပဲ ဘုရားကိုသာ အာရုံပွုနလေိုကျပါတော့တယျ ။ တဈလမျးလုံး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ စကားမပွောဖွဈကွတော့ပဲ အတှေးကိုယျစီနဲ့ အပွနျလမျးမှာ.. ရငျခုနျစရာအတှအေ့ကွုံတှေ တဈပှတေ့ဈပိုကျသယျဆောငျရငျး မနကျအာရုံတကျအလငျးရောငျကိုကွိုနမေိပါတော့တယျ....။
သုဘရာဇာမငျးဒငျလဲ နှလုံးသားနဲ့လူ.... အသှေးအသားနဲ့တညျဆောကျထားတဲ့လူပဲဗြာ... ခတျေစကားနဲ့ ပွောရရငျ အဲဒီနရောမှာသာ ခငျဗြားတို့ဆိုရငျ ရူးတောငျသှားဦးမယျ.....။ မပွောပဲ ခနျြထားခဲ့တာတှရှေိနပေါသေးတယျ....။ ဘယျလောကျပဲကွုံခဲ့ကွုံခဲ့...မငျးဒငျတို့က ဒီအလုပျကိုဆကျလုပျနဦေးမှာပါ ။ ဘယျလောကျပဲခွောကျလှနျ့ခွောကျလှနျ့...မငျးဒငျတို့က ဆကျလုပျနဦေးမှာပါ...။ အကူအညီလိုရငျပွောပါဆိုတိုငျး
ကွောကျမနကွေပါနဲ့.... တဈခြိနျခြိနျမှာ အကူအညီလိုလာကွဦးမှာပါ....။ အဲဒီအခါကရြငျ သုဘရာဇာမငျးဒငျကွီးကိုသတိရလိုကျပါ.....။ မငျးဒငျလဲ ဒီလမျးကိုသှားရဦးမှာပါဗြာ....။ သာရေးအတှကျပဲလိုလို...နာရေးအတှကျပဲလိုလို...သှေးပဲလိုလို... အရေးပျေါပဲလိုလို... ဆီဖိုးနဲ့ သဒ်ဓါလို့လှူတဲ့ ငှကေလှဲပွီး ပိုမယူပါဘူး... ။ တဈခါတဈရံမှာ ဆီဖိုးအိတျစိုကျရတဲ့အပွငျ... သင်ျဂွိုလျစားရိတျပါပွနျလှူခဲ့ရတာတှရှေိပါတယျ ။
သခငျစံရှလေမျး... အမှတျ ( ၁၁ ) ၊ ဒဂုံမွို့သဈ ( အရှပေို့ငျး )
ဖုနျး.... ဝ၉ ၂၅၀ဝ၁၀၁၉၉
ခဈြခငျလေးစားရပါသော စာဖတျပရိတျသတျအပေါငျးတို့ခငျဗြား... ယ်ခုစာဖွဈမွောကျဖို့အတှကျ ကိုမငျးဒငျကိုယျတိုငျ လကျရေးမူဖွငျ့ရေးသားပေးပို့လာသညျကို...စာရေးသူမှ ပွနျလညျပွငျဆငျမှနျးမံခွငျး... ဖတျကောငျးအောငျ ပွငျဆငျရေးသားဖွညျ့စှကျခွငျးမြားပွုလုပျပွီး တငျဆကျလိုကျရပါသညျ ။ နရောအမညျ လူအမညျမြား အမှနျအတိုငျးရေးထားပါသညျ ။